I-Semalt - Indlela Yokuqeda Ingozi Yokuhlasela Kwe-Malware?
Akunakwenzeka ukuba sihlale siphephile kwi-intanethi. Ngisho nesofthiwe esiphezulu se-antivirus software nezinhlelo azikwazi ukuqeda izingozi ezibangelwa ukuhlaselwa nokungena. Ngakho, amathuba akho okutheleleka ngama-virus ahlale ephakeme. Kodwa-ke, singazivikela e-intanethi ngokuzivumelanisa izinyathelo ezimbalwa futhi sinakekele izilungiselelo zethu zokuphepha.
Kungenzeka ukunciphisa izingozi zokuhlaselwa kwe-malware ngalezi zindlela namasu ahlongozwa nguRyan Johnson, iMenenja Yokuthengisa Ephezulu Semalt Amasevisi Edijithali:
1. Kufanele uxhumane nomhlinzeki wakho womkhiqizo we-ESET uma ngabe i-hacker ikuhlasele noma uhlelo lwakho alusebenzi kahle.
2. Kufanele uzivikele ngezinguqulo zakamuva ze-ESET imikhiqizo.
3. Kufanele njalo usebenzise ukuphequlula okuphephile futhi ufake i-antivirus yakamuva kanye nesofthiwe yokulwa ne-malware.
4. Gcina amakhompyutha akho avikelwe ngokuthola amaphasiwedi aqinile namagama abasebenzisi.
5. Zifundise wena nabantwana bakho ukuthi ungahlala kanjani uvikelekile kwi-inthanethi.
Zivikele ngemikhiqizo ye-ESET
Kubalulekile ukugcina imininingwane yakho ivuselelwe. Abachwepheshe emalashini e-ESET basho ukuthi izinsongo eziningi ze-intanethi zibangelwa ngoba abantu abaqapheli ukuvuselela izinhlelo zabo zokusebenza kanye nezinhlelo zokusebenza. Ngakho-ke, kubalulekile ukugcina idatha yakho ivikelwe ngezinguqulo zakamuva ze-ESET. Izinguqulo zayo ezibuyekeziwe zibona ngokushesha izinsongo futhi zingagcina ama-computer akho avikelwe nxazonke. Kufanele ube nemikhiqizo yezokuphepha ye-ESET. inkampani futhi ubacele ukuthi bangene kanjani izinguqulo zakamuva. Asikho isidingo sokuzama izinguqulo ezindala ezingenalutho. Ukuqinisekiswa kwemikhiqizo ye-ESET kubalulekile ukuze uqiniseke ngokuphepha okuphelele nokuvikeleka. Ngaphandle kwalokho, ungakwazi zama izitshudeni.I-ESET Smart Security inenombolo enkulu yezibhamu ezizokhethwa kuzo. Kufanele ugcine izinhlelo zakho zokuvikela ifayela lapho usebenzisa i-intanethi njengoba izokwandisa ukuphepha nokuphepha kwakho kwe-intanethi. Okokugcina kodwa hhayi okungenani kufanele wenze amaskrini ekhompuyutha njalo. Njalo ekuseni lapho uhlala ngaphambi kwekhompuyutha yakho yekhompuyutha, kuhle ukusebenzisa ithuluzi lokuvikela unqulo wesi arab bese ulivumela ukuskena isistimu yakho yonke.
Zenza ukuphequlula okuphephile kwe-intanethi
Kufanele njalo usebenzise ukuphequlula kwe-intanethi ephephile. Kulokhu, kufanele ukhawulele ukufinyelela kumakhasi ewebhu angaziwa futhi asolisayo. Kubalulekile ukuvula isikhangiso sakho ngesikhathi usebenzisa amaphrofayli wakho wezintandokazi zenhlalo noma ukuvula i-intanethi. Ngesikhathi esifanayo, kufanele ukhethe amaphasiwedi anembile futhi ahlala isikhathi eside necala eliphansi kanye necala eliphansi. Akufanele nanini wabelane ngephasiwedi yakho nanoma ubani, nganoma iyiphi imali. Hlala kude nama-imeyili avela kuma-ID amasha nabantu abangaziwa. Akufanele neze uchofoze izixhumanisi nezinamathiselo ze-imeyli ogaxekile ngoba lokhu kungaba yingozi kumadivayisi wakho wekhompyutha.
Gcina ikhompyutha yakho ivikelwe
Kufanele ugcine ama-computer akho avikelwe. Ngenxa yalokhu, kufanele ulondoloze amafayela akho kanye nedatha ebalulekile njalo. Qinisekisa ukuthi uphinda le nqubo kathathu ngesonto njengoba ungafuni ukulahlekelwa amafayela namafolda akho. Uma usebenzisa amadivayisi wangaphandle njenge-USB ne-DVD, kufanele uguqule isofthiwe yakho ye-antivirus ukuvimbela ama-virus ne-malware. Akufanele neze ushintshe izilungiselelo ezizenzakalelayo zedivaysi yakho kuze kube yilapho ubona izinto ezithile ezingavumelekile.